USDP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်ကြည်သိန်းနှင့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်း > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / USDP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်ကြည်သိန်းနှင့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်း
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ February 1, 2017 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 1,453 Views
မေး ။ ။ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့်အရွေးခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဘာလို့ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံရလဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း ဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့တယ်၊ ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ပါတီက တာဝန်ပေးတဲ့အတွက် အခုလို ဝင်ရောက်အရွေးခံရတာပါ။
မေး ။ ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်အရွေးခံတယ်ဆိုတော့ ဆရာကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲနဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို သိပါရစေ။
ဖြေ ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း ဒေသခံအများစုက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို မြန်မာပါတီလို့ထင်ပြီး မဲမထည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ ပြောခံရတာလည်း ရှိတယ်ပေါ့နော်၊ နောက် ဘီလူးကျွန်းမှာလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အင်အားကြီးတဲ့ပါတီမဟုတ်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲက ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ပဲ ရခဲ့တယ်၊ အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အများကြီးကြိုးစားဖို့ လိုတယ်ပေါ့နော်။
USDP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်ကြည်သိန်း(MNA)
မေး ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် မြို့နယ်မှာ ပါတီကနေ ဘယ်လောက်ထိ အကူအညီပေးတာလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ပါတီက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးတာရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကော်ပွဲအပေါ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ယုံကြည်ထားလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကျနော့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကတော့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို လက်တွေ့ကျကျ အလုပ်လုပ်ပေးစေချင်တဲ့ ဆန္ဒပါ၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က မွန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် လူမျိုးအတွက်ကိုပဲ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမယ်၊ ဆည်မြောင်းဌာနမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီးတော့ ဒေသခံ လယ်သမားတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးခံမယ့် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ မြင်ပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဒေသခံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်က အများကြီးရှိပါတယ်၊ အဓိကကတော့ ဘီလူးကျွန်းမှာ လယ်ဧကတွေ ရေနစ်မြုပ်နေတာရှိတယ်၊ မြောင်းတွေကို ပြန်တူးဖော်ဖို့ ရှိပါတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ လယ်သမားတွေ စပါးမျိုးစေ့ ကောင်းကောင်းတွေရရှိဖို့အတွက် စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ တကယ်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရလျှင် ဘယ်ကိစ္စကို အဓိကဦးစားပေး လုပ်သွားမှာလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကျနော့ရဲ့ ပထမဦးစားပေးက လယ်သမားတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြေရှင်းသွားမယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဒေသခံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို တစ်ခြားသောပါတီတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။
မေး ။ ။ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ဘာများ မှာကြားချင်ပါသလဲ ?
ဖြေ ။ ။ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရတာပါ၊ ဒေသခံတွေ နှစ်သက်ရွေးချယ်တဲ့သူပဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှာပါ၊ ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဘီလူးကျွန်းဖြစ်လာမယ်လို့ မှာချင်ပါတယ်။
အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကို မွန်သတင်းအေဂျင်စီမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင်- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန (ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ငြိမ်း)
ပညာအရည်အချင်း- B.E (စက်မှု)
လူမျိုး/ ဘာသာ – မွန်/ ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် – ဦးမြမွှေး
အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ – ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်
ယှဉ်ပြိုင်မည့်လွှတ်တော် – ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ်- ချောင်းဆုံမြို့နယ်
ပါတီတာဝန် – ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဌ မွန်ပြည်နယ်။
လူမှုရေး/ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားခဲ့မှုများ (အကျဉ်း)- ၁၉၆၄ ခုနှစ်- အမက (ကွမ်ရိုက်)၊ အထက (ရွာလွတ်)၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၆ ခုနှစ်ထိ စက်မှု အထက မော်လမြိုင်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ ၁၉၇၉ ခုနှစ်ထိ ဒေသကောလိပ် (မော်လမြိုင်)၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တွင် B.E (စက်မှု) ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၃ တွင် လယ်ယာ နှင့် သစ်တောဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဒု- လုပ်ငန်းမှူးအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး (၁-၁-၂၀၁၅) တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ) ရာထူးဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။
ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကွမ်ရိုက်- ညောင်လမ်း လမ်းမ၊ ဒေါင်းဥ- ကလွီလမ်း ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်း စသော လူမှုရေးပရဟိတ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀ဝ၂ ခုနှစ်တွင် မွန်ပြည်နယ် ဂုဏ်ဆောင်လက်မှတ်၊ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်တွင် စီမံထူးချွန် တံဆိပ် (တတိယအဆင့်) ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
ယခုအခါ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၊ မွန်ပြည်နယ် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
Previous ညီညွတ်ရေးမလိုလားသူများပါတီမှနုတ်ထွက်ကြရန် မွန်လူငယ်များဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆို
Next စစ်ပွဲများ ပိုမိုအရှိန်မြှင့်တက်စေမည့် IFC ၏ရေကာတာစီမံကိန်းများကို အစိုးရတားဆီးသင့်ဟု KPCC ပြော